သင်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်ကို တိုးတက်စေမယ့် အချက် (၁၄) ချက်
သင်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်ကောင်းမွန်စေမယ့် အချက်တွေဖြစ်ပြီး Short Term Memory (မှတ်ဥာဏ်တို) နဲ့ Long Term Memory (မှတ်ဥာဏ်ရှည်) ကိုပါ မြင့်တက်လာစေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။
စာမေးပွဲဖြေဖို့ အနီးကပ် အာရုံစိုက်လေ့လာနေသူများအတွက် ပိုမိုလိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်ပါတယ်။
ဆယ်တန်းဖြေဆိုခါနီး စာသင်သားများအတွက်တော့ လိုက်နာလုပ်ဆောင်သင့်ဆုံးအချက်များဖြစ်ပါတယ်။
- တစ်ရက်ကို မိနစ် ၂၀ ခန့် လမ်းလျှောက်ပေးမယ်ဆိုရင် မှတ်ဥာဏ်ကိုပါ ပိုမို အားကောင်းစေပါတယ်။ စိတ်ဖိစီးမှုကိုလည်း လျော့နည်းစေတဲ့အတွက် စာမေးပွဲဖြေဆိုရက်တွေမျိုးမှာပါ အချိန်ရအောင်ပေးပြီး လမ်းလျှောက်သင့်ပါတယ်။
၂. မှတ်စုစာရွက်ရေးပါ၊ မြင်သာတဲ့နေရာမှာ ကပ်ထားပါ၊ သတိထားပြီး ဖတ်ပေးပါ။
- သင်ကြားခဲ့ရတဲ့ Formula လို၊ အရေးကြီးစာသားလိုအရာတွေကို မှတ်စုထုတ်ပြီး စာအုပ်မှာ ရေးထားတာထက် Flash Card (မှတ်စုစာရွက်အသေးစား) ပေါ်မှာ ရေးသားပြီး ကိုယ့်ရဲ့စာကြည့်စားပွဲ၊ အခန်းနဲ့ နီးစပ်ရာနံရံမှာ ကပ်ထားပေးပါ။
- ရေးချိန်မှာ အလွတ်ရေးပါ၊ နံရံကပ်ထားပြီးချိန်မှာလည်း မိမိအလွတ်ရနေသည့်အတိုင်အောင် မျက်စိရှေ့ရောက်လာတိုင်း ပြန်ဖတ်ပေးဖို့ဖြစ်ပါတယ်။
၃. စာဖတ်ပါ၊ မကျက်ပါနဲ့။
- ယနေ့ခေတ်ထိအောင် ပြည်တွင်းစာသင်သားအများစု မှားယွင်းစွာလေ့ကျင့်ကျက်မှတ်နေဆဲ ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ပေးထားတဲ့စာသားကိုပဲ အလွတ်ရအောင် ကျက်မှတ်ကြပါတယ်။
- ဒီအချက်ဟာ မှားယွင်းတဲ့လေ့လာမှုပုံစံဖြစ်ပြီး စာတစ်ပုဒ်၊ အကြောင်းအရာတစ်ခုကို အလွတ်ရအောင် ကျက်မှတ်ခြင်းထက်၊ ထိုအကြောင်းအရာရဲ့သဘောသဘာဝကိုပဲ နားလည်အောင် လေ့လာမှတ်သားဖို့ ဖြစ်ပါတယ်။
- မိမိလေ့လာမှတ်သားရမယ့်အကြောင်းအရာကို အရင်ဆုံးဖတ်ပါ၊ အရေးကြီးအချက်၊ စာလုံး၊ မှတ်သားဖွယ်ရာကို မျဉ်းသားအမှတ်အသားပြုပါ။
၄. အမေး၊ အဖြေပုံစံနဲ့ လေ့ကျင့်ပါ။
- သင့်အနေနဲ့ ကောင်းစွာ သဘောပေါက်နားလည်ပြီဖြစ်တဲ့ သင်ခန်းစာအဆုံးမှာ မေးခွန်းဟောင်းများကို ပြန်လည်လေ့လာခြင်းဖြစ်စေ၊ မိမိကိုယ်တိုင်မေးခွန်းပြန်ထုတ်ပြီး ဖြေဆိုခြင်းဖြစ်စေ လေ့ကျင့်ပါ။
၅. တေးသွားချိုချိုများ နားဆင်ပေးပါ။
- ဆူညံကျယ်လောင်တဲ့ သီချင်းမျိုးမဟုတ်ဘဲ Classical သီချင်းများကို အသံငြိမ့်ညောင်းရုံဖွင့်ပြီး နားဆင်ပါ၊ အပန်းဖြေပါ၊ လေ့လာကျက်မှတ်ချိန်မဟုတ်ဘဲ တွက်ချက်လေ့ကျင့်ချိန်မှာတွေလည်း သီချင်းဖွင့်ထားနိုင်ပြီး စစ်တမ်းများအရ စိတ်ဖိစီးလျော့ကျစေတဲ့အပြင် မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကို ပိုမိုကောင်းမွန်လာစေတာ တွေ့ရပါတယ်။
၆. အချိန်ကြာ၊ တဆက်တည်းလေ့လာမှုမလုပ်ပါနဲ့။
- အနီးကပ်လေ့လာမှုတွေအများစုမှာ စာသင်သားတွေဟာ အချိန်ရှိသလောက် စာကြည့်နေတတ်ကြပါတယ်။ ဒီအချက်ဟာ အချိန်ကုန်လူပမ်းဖြစ်စေပါတယ်။
- လေ့လာမှတ်သားချိန်ကို စနစ်တကျ အချိန်ဆွဲပြီး လေ့လာကျက်မှတ်ပါ။ နာရီအနည်းငယ်လေ့လာပြီးတိုင်း နားချိန်ပေးပါ။
၇. အနံ့၊ အရသာကို တစ်မျိုးတည်းသုံးပါ။
- သင် ပီကေစားတတ်ပါသလား၊ စာမေးပွဲခန်းမှာရော ပီကေစားခွင့်ပေးပါသလား၊ တကယ်လို့စားတယ်၊ စားခွင့်ရမယ်ဆိုရင်၊ စားနေကျ အရသာတစ်ခုတည်းကိုပဲ စားပါ၊ မှတ်ဥာဏ်ကို တိုးတက်စေပါတယ်။
- သင့်အခန်းမှာ ဘယ်လိုအနံ့မျိုးဖြန်းပါသလဲ၊ ဒါပေမယ့် စာဖြေခန်းမှာတော့ သင့်စိတ်ကြိုက်အနံ့ကို ဖြန်းထားမှာ မဟုတ်ပါဘူး။ ဒီတော့ အကောင်းဆုံးဖြေရှင်းနိုင်စရာနည်းလမ်းက ရေမွှေးဆွတ်ပါ၊ အနံ့တစ်မျိုးတည်းကိုပဲ စွဲသုံးပါ။
- မိမိလေ့လာချိန်က သုံးတဲ့ရေမွှေးနံ့ကိုပဲ စာဖြေခန်းသွားချိန်မှာ ဆက်သုံးပါ၊ သင့်အတွက် စာတွေပိုရပါစေလိမ့်မယ်။
ကျန်ရှိနေသည့် အချက် (၇) ချက်ကို နောက်နေ့မှ ဆက်လက်တင်ပြပေးပါ့မယ်။
ဒီတော့ ကျောင်းသား၊ ကျောင်းသူများသည် မိမိမှတ်ဥာဏ်ကို အကောင်းဆုံး အသုံးချနိုင်ရန် လမ်းညွှန်မှုအတွက် လိုအပ်သော ဆရာ၊ ဆရာမများကို Sayar.com.mm တွင် ဆက်သွယ်နိုင်ပါတယ်။
« Business English ဆရာများအတွက် အကြံကောင်း ၅ ချက်
သင်ရဲ့မှတ်ဥာဏ်စွမ်းရည်ကို တိုးတက်စေမယ့် အချက် ၁၄ ချက် (၂) »